Maxaa looga hadlay kulankii Golaha Wasiirada Hirshabelle maanta? - Jowhar Somali news Leader
Home News Maxaa looga hadlay kulankii Golaha Wasiirada Hirshabelle maanta?
Maxaa looga hadlay kulankii Golaha Wasiirada Hirshabelle maanta?
Madaxweyne Ku Xigeenka Dowlada HirShabeelle ahna Kusimaha Madaxweynaha Cali Gudlaawe Xuseen ayaa maanta waxa shir gudoomiyay kulankii todobaadlaha ee golaha wasiirada xukuumada kaasoo looga hadlay arimo ay kamid yihiin Is xog wareysi la xiriira howlaha wasaaradaha iyo ka hortaga musiibooyinka ka dhasha fatahaadaha.
Shirka Golaha Xukuumada oo todobaadkiiba mar qabsooma waxaa maanta warbixino looga dhageystay qaar kamid ah Wasaaradaha iyadoo sidoo kale Wasiirka Wasaarada Beeraha iyo Waraabka uu golaha usoo jeedisay daraasaad ay wasaaradu ka sameeysay ka hortaga qataraha fatahaadaha.
Maadama lagu jiro xili jiilaal ah lagama maarmaan ay tahay in laga hortago fatahaado dhaca sida kuwii dhacay sanadkii hore wasaarada beeraha ayaa golaha la wadaagtay muhiimada ay leedahay in laga howlgalo oo carro saarid iyo geedo bixin lagu sameeyo wabiga dhexdiisa taasoo muhiim ah xalna u ah ka hortaga fatahaado dhaca.
Sidoo kale kulanka waxaa warbixin looga dhageystay Wasiirka Wasaarada Caafimaadka isagoo ka warbixiyay heerka uu marayo cudurada shuban biyoodka ah ee ka dilaacay qeybo badan oo kamid ah magaalooyinka DG HirShabeelle.
Wasiirka Caafimaadka ayaa sheegay in daawooyin ka hortaga shubanka ah ay gaarsiiyeen cusbitaalada Magaalooyinka Jowhar iyo Beledweyne sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in xarumo dadka shubanka uu soo rito ay ka hirgaliyeen deegaanada Hirshabeelle.
Ugu dambeyn wasiirka ayaa sheegay in todobaadyadii lasoo dhaafay dad ku dhow 495 riix oo uu soo ritay cudurkaan loo fidiyay adeeg caafimaad sidii todobaadkii hore ay xaaladu ahaydna ay hadda ka wanaagsan tahay.
Shirka golaha wasiirada hirshabelle